Home » #NABShow: ရှာရန်ရလဒ်များ
ဟိုင်း! အဆိုပါ2NAB ပြရန်၏နေ့ 2019 မှကြိုဆိုပါ၏! ကျနော်တို့ထပ်မှာနေ - သင်ကလူစည်ကားထိန်းချုပ်ခန်းကနေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဖြစ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးဆော့နဲ့သွားကြဖို့အဆင်သင့်အဖြစ်မထိုက်မတန်များမှာ! ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင်တို့အဘို့ store မှာ ALOT တယ်, ဒါကြောင့် blogged-နေနှင့်ဘယ်အရာကိုမြင်တော့ ...
ယနေ့ 2019 NAB ပြရန်၏ပထမဆုံးနေ့ - နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအဆင့်မယုံကြည်သောသူတို့ပင်ဖြစ်သည် !!! တံခါးတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ကြပါပြီ - ဒါပေမယ့်ငါနှင့်ငါ့သမားတွေကျနော်တို့လုပ်နိုင်သည့် NAB သတင်းအားလုံးစုဆောင်း-up, setting, ပြီးသားနာရီဒီမှာပါပြီ! အဆိုပါထိန်းချုပ်ရေး ROOM တွင်မြင်ကြသည်မဟုတ်လော ငါ NAB Show ကိုငါ့ထံသို့ဆိုလိုတယ်ဘယ်လောက်သင်ပြောပြလို့မရပါဘူး! ...
ထုတ်လွှင့် Beat Las Vegas မှာနှစ်စဉ် NAB Show မှာ, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်းပဧပြီလ 6-11, 2019, NAB Show ကိုမီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာ၏ဆုံလွှမ်းခြုံကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ထားသောညီလာခံအစည်းအဝေးများနှင့်ပြသခဲ့သည်, ရောင်းချသူနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့် In-depth ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်း၏တိုက်ရိုက်စီး feature ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းအရာမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် ...
ကျနော်တို့ပြီးနောက်-ပါတီများအတွက် 2019 NAB Show ကိုဖော်ပြထားခြင်းမထားဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့ NAB ပြရန်နှင့်အတူဆက်စပ်ပျော်စရာ၏ကြီးမားသောအတုံးအထဲကထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း! အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ပိုမိုသောအချက်အလက်များများအတွက် NAB Show ကိုပါတီအသေးစိတျကို click အချို့သည်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သကဲ့သို့, ဖိတ်ကြားချက်ကိုခြင်းဖြင့်သာလျှင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးဝန်ခံချက်တာဝန်ခံရှိသည်။ ဒါဟာသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးပြေးစာရင်းနှင့်အရှိဆုံးပြည့်စုံပါ! ကျနော်တို့ကို update ...
အဆိုပါ 4K 4Chariy ပျော်စရာ Run ကိုပု 2019 #NABShow မှာအများဆုံး "ဟုရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထား" ကွန်ယက်ဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်လာနေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာချွေးများနှင့် networking, ကြီးစွာသောအကြောင်းမရှိထောက်ပံ့စဉ် 2.49 မှာနေဝင်ချိန်ပန်းခြံတဝိုက်ထပ်ခါတလဲလဲဒီ 7-မိုင်ပြေးအတွက်တော်တော်များများအဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်: အင်္ဂါနေ့တွင် 30AM, ဧပြီ9။ အဆိုပါ 100% အခွန်နှုတ်ယူပြီးမှတ်ပုံတင်ကြေးအကျိုးကျေးဇူးများကို ...
1 ၏စာမျက်နှာ 4212345	»	102030...နောက်ဆုံး»